सुगाले ‘रामराम’ बोल्न सिकेको, परिवारका सदस्यसँग सामान्य कुराकानी गरेको सुन्नु नै भएको होला । तर सुगाले यूट्युब भिडियो हेर्छ भनेको सुन्दा पत्याउनुहुन्छ ? पत्याउन गाह्रो पर्ला । सुगाले आफैं यूट्युब चलाउन सक्छ ? सक्दैन भन्ने जवाफ नै आउला ।
भारतको बिहारस्थित कटिहार जिल्लामा अनौठो सुगा छ, जसले आफ्नो मुखको चुच्चोले यूट्युब खोलेर हेर्ने समेत गर्छ ।
मोबाइलमा रमाउने त्यो सुगा यूट्युब हेर्न पाए मख्ख पर्छ भने नपाए हैरान हुन्छ । कटिहारीको नयाँ टोलमा बस्ने राजेशकुमार बर्माको घरमा रहेको सुगाको नाम मिट्ठू हो । यो घरका सदस्यसँग कुराकानी गर्ने, खेल्नेदेखि यूट्युबमा मन पर्ने भिडियो खोजेर हेर्छ ।
यूट्युबमा त्यो सुगालाई यस्तो बानी परेको छ कि त्यो मोबाइल विना बस्नै सक्दैन । सुगा स्मार्ट फोनलाई आफ्नो मुखको चुच्चोले खोल्छ । आफैं मोबाइलमा मन पर्ने भिडियो लगाएर हेर्छ । त्यो सुगा यूट्युबमा सुगा सम्बन्धी भिडियो नै बढी हेर्ने बानी परेको छ ।
घरका मान्छेले मिट्ठूलाई बच्चा जस्तै पालेका छन्, त्यो परिवारको सदस्य जस्तै छ । परिवारका सदस्यले यसलाई चम्चाले खाना खुवाउँछन् । मिट्ठूलाई एकपल्ट देखेका मान्छे यसको प्रशंसा गर्छन् ।
परिवारका अनुसार मिट्ठूले कुनै अशुभ घटनाबारे समेत पहिल्यै जानकारी दिने गरेको छ । स्थानीयहरू भन्छन् कि डिजिटल युगमा मान्छे मात्रै नभई पशुपन्छी समेत प्रविधिमैत्री हुन थालेका छन् ।
सुन्दर देखिने चक्करमा इन्जेक्सन लगाउँदा ओठ दुईगुणा ...
नीतीश कुमारका ‘अंगुलीमाल’ प्रशंसक, चौथोपटक मुख्यम...
किन जन्मन्छन् जुम्ल्याहा बच्चा ?
प्रेमिकालाई राति घरमा भेट्न जाँदा खाए कुटाइ, भोलि...